Cuba iyo asalka magaceeda | Safarka Absolut
Waa jasiiradda ugu weyn Antilles iyo mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee dalxiis ee Kariibiyaanka. Meel gaar ah oo gaar ah sababo badan awgood isla markaana leh taariikh dheer oo xiiso leh. Laakiin, Halkee ayuu ka yimid magaca Cuba? Magaceeda asal ahaan? Tani waa su'aasha aan isku dayeyno inaan ku xallino qoraalkan.
Runtu waxay tahay asalka asalka erayga Cuba haba yaraatee ma cadda oo wali waa mawduuc ay ku muransan yihiin aqoonyahannada maanta. Waxaa jira dhowr mala-awaal, qaar ayaa ka aqbala badan kuwa kale, qaarna runtii xiisaynaya.
Ugu horreyntii, qodob muhiim ah waa in la caddeeyaa: goorma Christopher Columbus Wuxuu yimid jasiiradda markii ugu horreysay (Oktoobar 28, 1492), marna kuma fakarin inuu cagaha dhigayo qaarad cusub. Xaqiiqdii, marka loo eego xisaabintiisa qaldan, dhulkaas cusub wuxuu noqon karaa oo kaliya Cipango (sidii Japan markaa loo yiqiin), taas oo suurtagalnimada in la baabtiiso jasiiradda aan loo tixgelin si uun.
Christopher Columbus wuxuu yimid jasiiraddu markay ahayd Oktoobar 28, 1492, isagoo markii ugu horreysay ka maqlay afafka dadka asaliga ah erayga "Cuba".
Sanado ka dib, Isbaanishku wuxuu go'aansaday inuu ku magacaabo daahfurkaan magaca Jasiiradda Juana, iyadoo lagu sharfayo amiirka da'da yar Yooxanaa, wiilka keliya ee wiilka Boqorrada katooliga. Si kastaba ha noqotee, magacani ma qabsan. Shaki la'aan, tan waxaa saameyn ku yeeshay xaqiiqda dhimashada dhicis ah 1497 ee qofka loogu yeeray inuu noqdo dhaxalka taajka, da'da 19.
Ka dib, iyada oo loo marayo amarkii boqortooyada ee Febraayo 28, 1515, isku day ayaa la sameeyay si loo sameeyo magaca rasmiga ah ee Cuba inuu noqdo kan Jasiiradda Fernandina, sharafta boqorka, laakiin goobta-magacu ma qabsan. Xaqiiqdii, ficillada rasmiga ah ee qeybtii labaad ee qarnigii XNUMXaad waxay kaliya tixraacayaan dhulkan iyadoo la adeegsanayo magaca Cuba.
1 Asalka asalka ah
2 Mala awaal la yaab leh oo ku saabsan asalka ereyga Cuba
2.1 Aragtida Boortaqiiska
2.2 Aragtida carabta
Maanta sharaxaadda ugu badan ee la aqbalay ee su'aasha ah "halkee ayuu ka yimid magaca Cuba" waa tan asalka asalka ah.
Dad badan oo reer Cuba ah waxay jecel yihiin fikradda ah in magaca dalkooda uu ka yimid erey asal ah oo asal ah: Cuba, waxaa loo adeegsaday luqadda ay ku hadlaan Taínos. Ereygan ayaa macnihiisu noqon lahaa "Dhul" ama "beer". Marka loo eego aragtidan, waxay ahaan lahayd Columbus laftiisa oo maqli lahaa dariiqadan markii ugu horreysay.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa suurtagal ah in isla ereygan ay adeegsadeen dadyow kale oo asal ahaan ka soo jeeda jasiiradaha kale ee Kareebiyaanka ah, kuwaas oo afafkooda ay ka yimaadeen asal isku mid ah, qoyska afafka Arauca.
Halkee ayuu ka yimid magaca Cuba? Sida laga soo xigtay khubarada qaar, waxay u jeedin kartaa buuraha iyo meelaha sare
Isla mala awaalka wadaniga ah, waxaa jira nooc kale oo soo jeedinaya in macnaha magacaani laxiriiri karo meelaha meelaha sare iyo buuraha ku badanyihiin. Taasi waxay umuuqataa in lagu muujiyo magacyada meelaha qaarkood oo ku habboon Cuba, Haiti iyo Dominican Republic.
Aabaha Bartholomew ee Guryaha, oo kaqeybqaatay qabsashadii iyo wacdinta jasiiradda intii udhaxaysay 1512 iyo 1515, wuxuu ku tilmaamay shuqulladiisa adeegsiga ereyada "cuba" iyo "cibao" oo la mid ah dhagxaan waaweyn iyo buuro. Dhinaca kale, tan iyo markaas iyo ilaa maanta magaca asaliga ah ee Kubanacan ilaa gobolada buuraleyda ah ee bartamaha dalka iyo Bariga.
Magaca Cuba sidaas darteed wuxuu ka mid noqon lahaa kiisaskaas oo muuqaalku u bixiyo magaceeda waddanka. Nasiib darrose, aqoon la'aanta jirta ee ku saabsan luqadaha Taino iyo Antillean ayaa naga horjoogsanaya inaan xaqiijino tan.
Mala awaal la yaab leh oo ku saabsan asalka ereyga Cuba
In kasta oo ay jiraan wax isku raacsan taariikhyahannada iyo aqoonyahannada cilmiga luqadaha ee ku saabsan halka uu magaca Cuba ka yimid, haddana waxaa jira mala-awaallo kale oo xiiso leh oo mudan in la xuso:
Waxa kale oo jira a Qiyaasta Bortuqiiska si loo sharaxo halka magaca Kuuba ka yimid, in kasta oo xilligan si adag aan loo tixgelin. Aragtidan ayaa sheegaysa in ereyga "Cuba" uu ka yimid magaalo ku taal koonfurta Burtuqiiska oo sita magacaas.
Taallada Columbus ee ku taal magaalada Boortaqiiska ee Cuba
"Cuba" ee Boortaqiiska waxay ku taal gobolka Hoose Alentejo, oo u dhow magaalada Beja. Waa mid ka mid ah meelaha sheegta inay tahay halka uu ku dhashay Columbus (runtiina waxaa ku taal taallada daahfurka magaalada). Fikradda taageerta aragtidan ayaa ah inuu isagu noqon lahaa kan ku baabtiisi lahaa jasiiradda Kariibiyaanka xusuusta waddankiisa.
In kasta oo ay tahay mala-awaal la yaab leh, haddana waxaa ka maqan qallafsanaan taariikheed.
Xitaa ka baxsan badan kii hore, in kasta oo ay waliba leedahay xoogaa taageerayaal ah. Sida laga soo xigtay iyada, magaca ugu sarreeya «Cuba» wuxuu noqon lahaa kala duwanaansho ah ereyga carabiga koba Tan waxaa loo adeegsaday in lagu qoondeeyo masaajiddo ay ka soo baxaan qubbad.
Aragtida Carbeed waxaa lagu aasaasay goobta uu ka degay Christopher Columbus, Bariay bay, oo hadda ku sugan gobolka Holguín. Halkaas waxay ahaan lahayd qaabab fidsan oo buuraha u dhow xeebta taas oo xasuusin lahayd badmareenka kan kobaaska Carabta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cuba iyo asalka magaceeda